Soo saaraha iyo Warshada ugu Fiican Afar-Way-Dheer |Huaruide
Nidaamka afar-geesoodka ah ee raadiyaha ayaa si otomaatig ah u leh kaydinta cufnaanta sare iyo nidaamka dib u soo celinta ee maaraynta alaabada paletteed.Waa xalka ugu fiican ee kaydinta badeecooyinka leh tiro badan iyo SKU yar, oo si ballaaran loogu isticmaalo warshadaha cuntada iyo cabitaanka, kiimikooyinka, saadka dhinac saddexaad iwm.
Sidee buu Huaruide shittle afar-gees ah u shaqeeyaa?
Huaruide baabuurka afar-geesoodka ah wuxuu awoodaa inuu u socdo 4 jiho ee haadka kaydinta iyo jidadka muhiimka ah.Sidan oo kale shittle-ku wuxuu u bedeli karaa haad la'aan shaqaynta forklift, si weyn u badbaadiso qiimaha shaqada iyo hagaajinta waxtarka bakhaarka.
Nidaamka afarta hab ee Huaruide wuxuu inta badan ka kooban yahay nidaamka racking, shuttle radio, wiish, qaade iyo nidaamka WMS/WCS.Xariiqda wareejinta waxa la hor dhigayaa habka rarista si loo soo qaado loona helo sariiraha.Wiish waxay ka qaadi doontaa shuttle raadiyaha iyo sariiradaha dhulka ilaa lakabyo kala duwan.Tilmaamida nidaamka WMS/WCS, shuttle-ka raadiyaha waxa uu awoodaa in uu si toos ah u soo qaado oo uu geeyo palettes booska loo magacaabay ee gudaha rafaadka, kaas oo xaqiijin kara kaydinta tooska ah iyo soo celinta alaabta bakhaarka.
Sidee Huaruide shittle afar-gees ah uga dhigaysa saadka mid fudud?
Gaadiidka afar-jidka ah wuxuu u dhaqaaqi karaa 4 jiho, taas oo macnaheedu yahay inay aad u dabacsan tahay, oo u oggolaanaysa in la sameeyo istiraatiijiyad kaydinta badan.Shuttles-yada kala duwani waxay ku shaqayn karaan isku mid iyagoo hoos imanaya tignoolajiyada isgaarsiinta si ay u buuxiyaan waxqabad kasta oo loo baahan yahay xilliga ugu sarreeya.Sababtoo ah nidaamka WMS, amarka waxaa lagu samayn karaa 100% saxsanaanta xawaaraha sare leh, iska ilaali khaladaadka ay keento hawlgalka gacanta.
• Socdaal afar jiho ah, ka dibna waxay buuxin kartaa 6 dhaqdhaqaaq jihada ah, hore-u-dhac, bidix-midig, dhaqdhaqaaq kor-hoos ah, la shaqaynta wiishka.
• Bakhaar afar jiho ah wuxuu gaari karaa meel kasta oo bakhaar ah (ama goobta kale ee gaadiidka) iyadoo loo eegayo baahida macaamiisha, samee isticmaalka ugu badan ee bakhaarka kaydinta, oo ku habboon bakhaar nooca gaarka ah.La shaqaynta wiishka, waxay gaari kartaa dherer kasta oo uu u baahan yahay macaamilka.
• Baaxadda yar ee bakhaarka afar-geesoodka ah waxay hoos u dhigtaa dhererka lakab kasta, samee heerka isticmaalka buuxa ee booska bakhaarka.
Dhammaan alaabada qalabka iyo qaybaha xakamaynta ee shuttledu waa kuwa caadiga ah, qaan-gaadhka ah oo la isku halayn karo qalabka alaabta.Nidaamka xakamaynta wuxuu qaataa qaybaha xakamaynta fudud oo xasilan, wuxuu isticmaalaa algorithms gaar ah, wuxuuna isku daraa qaab dhismeedka farsamada fudud iyo adag ee shuttle laftiisa si loo gaaro hawlgal xasilloon, sax ah, degdeg ah oo la isku halleyn karo.
• Si aad ah u kordhi awoodda kaydinta, taas oo 3-4 jeer ka weyn nidaamka rarista dhaqanka.
• Kharash wax ku ool ah iyo waqti-badbaadinta, hoos u dhig qiimaha dhulka iyo shaqada
• Si otomaatig ah, heerka hoose ee khatarta ama dhaawaca qalabka iyo hawlwadeenka.
• Nadaamka WMS/WCS oo iskiis u nashqadeeyay si uu si fiican ugu dhigmo nidaamka shuttle.
• La heli karo si loo daboolo baahida awoodda kaydinta ee kala duwan iyadoo la hagaajinayo tirada shilka.
Shayga Halbeegga Odhaah
Cabbirka L*W*H 1100L*980W*150Hmm 1200W*1000D Pallet
1200L*980W*150Hmm 1200W*1100D Pallet
1300L*980W*150Hmm 1200W*1200D Pallet
Sifada Socodka Afar-Wadad, kontorool caqli leh
Awoodda Xamuulka 1500kg
Faaliga kor u qaadista 40mm
Wadista Safarka Matoorka
Qaabka Braking Braking-korontada (Servo)
Matoorka Wadista DC48 V
Awooda Baabuurta Safarka 1.2kw
Kor u qaadida Awooda Matoorka 0.75kw
Ka Fogaanshaha Caqabada Madaxbanaan Diritaanka, Dareemka Sawirka Korontada, Kormeeraha Fog (Ikhtiyaar)
Dardargelinta socdaalka 0.3m/S2
Xawaaraha safarka (Madhan) 1.5m/s
Xawaaraha safarka (Full) 1.2m/s
Muddada Isbeddelka Jidka ≤5s
Muddada Qaadista ≤5s
Bixinta Korontada Battery
Habka Dallacaadda Buugga/Automaatigga ah
Awoodda baytari 48V 36AH/45AH/60AH 1000D/1100D/1200D Pallet
Muddada Dallacaadda 1.5H ~ 2H
Nooca Battery Lithium Iron Fosfate Battery
Dib u Dalacsiinta Wareegga In ka badan 2000 oo jeer (100% dallaca)
Nolosha Battery In ka badan 2 sano
Shaqo maalmeed 8 saacadood
Matoorka Wadista Servo Motor
Habka Hawlgalka Online/keli/Buug/Manintanation
Ilaalinta Digniinta heerkulka aan caadiga ahayn / ilaalinta isku dhaca
Midabka Casaan/cad La habeeyay
Qayb Electron ah Alaab-qeybiye Odhaah
I/O Module Schneider
Bedel Awood Macnuhu Waa hagaag
Bedelka Hawada, Xiriiriyaha Schneider
Iftiinka tilmaame, badhanka beddel Schneider
Macmiilka Wifi MOXA
Goobta shaqada ee goobta Schneider Ikhtiyaarka
Hore: Gaadhida suufka
Xiga: Wareejinta lakabka